MyoWin, Author at နည်းပညာ - Page 8 of 11
All posts by MyoWin
jQuery if-else သင်ခန်းစာ – jQuery if else applicable tutorial
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက် ရေးမယ့် နမူနာ ပုံစံကို demo မှာ သွားကြည့်ပါ။ SEO Service website (www.seo.sg) က slider ကို သင်မယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် ရုတ်တရက်ကြီး မြင့်တက်သွားမှာစိုးလို့၊ if else လေး အရင် သင်ကြတာပေါ့။ ဒီနေ့တော့ မနေ့က သင်ခန်းစာကို နည်းနည်းလေး ပိုကောင်းသွားအောင်၊ ပိုပြီး သဘာဝကျသွားအောင် ကုဒ်လေး နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ပြပါမယ်။ မနေ့က jQuery slideToggle Tutorial မှာ Button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ box ကတော့ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Button ပေါ်က စာက အသေပဲဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က ပြောင်းချင်တာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းချင်လဲဆိုတော့ –
– box မပေါ်တဲ့ အခြေအနေမှာ button ပေါ်က စာကို Show Box လို့ ဖြစ်စေချင်ပြီးတော့
– box ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ button ပေါ်က စာကို Hide Box လို့ ဖြစ်စေချင်တာပါ။
if, else ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
jQuery slideToggle သင်ခန်းစာ – jQuery .slideToggle() tutorials
ဒီတစ်ခေါက်တော့ နည်းနည်းလေး ပိုခက်တဲ့ သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားပါမယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမဖတ်ခင် အရင်က ရေးဖူးတဲ့
01. What is jQuery
02. jQuery .hide() function
ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာတော့ css လေးလည်း နည်းနည်းပါပါမယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ coding စရေးရအောင်ဗျာ။
jQuery ဖြင့် ဖျောက်နည်း – jQuery .hide() function
ဒီနေ့တော့ jQuery သင်ခန်းစာ၊ စသင်ပါတော့မယ်။ အရင် what is jQuery post မှာတော့ jQuery အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပြီးတော့ jQuery ကို download လုပ်ပုံကိုလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ Download မလုပ်ရသေးတဲ့ လူများ download လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ Download လုပ်လို့ ရလာတဲ့ file ကို jquery.js လို့ နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ desktop ပေါ်မှာ test ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုဆောက်ပြီးတော့ jquery.js ကို အဲဒီ folder ထဲ ထည့်ထားပါ။ jQuery download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကုဒ် (code) စရေးပါတော့မယ်။ အရင် website building tutorials တွေမှာတုန်းကတော့ ကျွန်တော်သုံးတဲ့ code ရေးတဲ့ software (text editor) ကိုတော့ ပြောပြထားပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ notepad++ ကို အသုံးပြုပြီး ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ notepad++ ကို ဖွင့်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် file>new ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ file အသစ်ထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်း သေချာ ရိုက်ထည့်ပါ (ကူးမထည့်ပါနဲ့)
jQuery ဆိုတာဘာလဲ – What is jQuery? Explained detail.
– From valide ဆိုတာ မသိလို့ စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ဝဘ်ဆိုက် အခြေခံ ဗဟုသုတ – Basic Website Knowledge
Website Basic KnowledgeMyoWin
2. What is SEO/SEM?
SEO stands for Search Engine Optimization and SEM stands for Search Engine Marketing. Both have the same ideology. People do research via search engine if they want to know something. Not all people will know your website address. Therefore, in order people to know and see your website, we have to link your website with search engines. Making to get higher ranking among millions of website which linked to search engines is call SEO. By getting higher ranking, more people will know your website and your company, it’s also call SEM.
4. What is Flash?
Web technology or software developed by Adobe Systems Incorporated. It is able to create web content that combines sound, video and animation.
A type of programming language. It can add dynamic features to web pages and is used by many web services.
From: Basic Website Knowledge – Myanmar Web Designer